”Ma ahayn inaad Chris dharbaaxdo!” – Jada Pinkett Smith oo sheegtay inaysan xitaa doonayn inay guursato Will Smith (10 sano oo loo jaray) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Ma ahayn inaad Chris dharbaaxdo!” – Jada Pinkett Smith oo sheegtay inaysan...
”Ma ahayn inaad Chris dharbaaxdo!” – Jada Pinkett Smith oo sheegtay inaysan xitaa doonayn inay guursato Will Smith (10 sano oo loo jaray)
(Hadalsame) 09 Abriil 2022 – Akadeemiyada filimada ee Hollywood ayaa Jimcihii sheegay in guddiga maamulkoodu ay Will Smith ka mamnuuceen wax kasta oo ka mid ah dhacdooyinkeeda, oo uu ku jiro Oscar-ku, muddo 10 sano ah kaddib markii ninkan oo hantay jilaaga ugu fiicanu uu masraxa ku dhirbaaxay xiriiriyihii bandhigga Chris Rock isla xafladdii abaalmarinta.
“Oscar-kii 94-aad ayaa loogu talagalay in lagu xuso shakhsiyaad badan oo bulshadeenna ka mid ah kuwaas oo qabtay shaqo cajiib ah sanadkan,” ayay bayaan ku yiraahdeen David Rubin oo qaabilsan dhanka sawirrada socda iyo Madaxa fulinta Dawn Hudson.
“Si kastaba ha ahaatee, daqiiqadahaas waxaa hareeyey hab-dhaqanka aan la aqbali karin ee waxyeellada leh ee aanu aragnay ee uu Mr. Smith kusoo bandhigay masraxa,” ayay yiraahdeen.
Smith oo isaguna Oscars-ka iska casiley 1-dii Abriil, kaddib markii uu falkani dhacay 27-kii Maarso ayaa ka hadlay go’aanka Akadamiyaha oo ku yiri, “Waan aqbalay oo ixtiraamayaa go’aanka akadeemiyada,” isagoo raaligelinaya Rock, soo saarayaasha Oscars-ka, dadkii magacaabay ee joogey iyo daawadayaasha.
Dhanka kale, Jada Pinket Smith oo ah xaaska Smith ee darteed loo dhirbaaxay Chris ayaa ninkeeda ku khilaaftay dhirbaaxada uu ridey, tiiyoo ay jirto inay aad u qoslaysey markii uu falka samaynayey.
”Waxay ahayd xaalad kulul oo markaa taagnayd, balse ma ahayn inuu dhirbaaxo. Wuu ogyahay inuu ka badbadiyey (Smith), haa taa wuu ogyahay,” ayay ku tiri warqaadka todobaadlaha ah ee US Magazine, iyadoo ku doodaysa inay tahay naag adag oo aysan qofna ilaalin uga baahnayn.
Waxaa ka daran in Jada Pinkett Smith oo ay 2020 soo shaac baxday inay xiriir gogol dhaaf ah la lahayd fannaanka August Alsina, ayaa hadda sheegtay inaysan xitaa doonayn inay guursato Will Smith balse ay taa ku cadaadisey markii ay ogaatey inay leedahay uurka wiilkeeda Jada oo ay habeenkii oo idil la ooyaysey, sida uu qorayo Dail Mail, iyadoo sheegtay in Will iyo hooyadeed ay ku qalqaaliyeen oo ay ooyin iyo murugo ku jirtey habeenkii arooska.
Waxay sheegeen in ay ku dadaaleen inaysan doodin iyagoo isla qaatay koorso ku saabsan sida la isula hadlo iyadoo aan la qaylin, la caroonin, la is caayin, maadaama ay taasi dhaawacayso ilmaha ay hayaan iyo jawiga guud, iyagoo is baraya si ay isu xakameeyaan marka ay caroodaan. ”Waayo qofka lama hadli kartid marka aad caraysan tahay,” ayay tiri Jada.
Smith ayaa isna sheegay inuu kusoo barbaaray guri uu aabihii hooyadiis dili jirey oo uu wejiga ka dharbaaxi jirey, balse uu isagu doonayey inuu abuuro jawi kaas aad uga geddisan oo deggan islamarkaana nabdoon.
Previous articleMW Muuse Biixi xalay si wanaagsan buu ula hadlay Soomaalida marka ”hal kelmad” laga reebo
Next articleLaba nin oo sidii ay isu garaacayeen halis is geliyey (Ma malayn kartid waxa ay ku murmeen?!)